मेरी क्रिसमस स्लाइड 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
मेरी क्रिसमस स्लाइड
अघिल्लो खेल: क्रिसमस को लागी ..
क्रिसमस प्रेमीहरू स्लाइड क्रिसमस धेरै महत्त्वपूर्ण बिदा हो। क्रिसमस प्रेमी स्लाइड एक खेल हो [...]
क्रिसमस चाँडै आउँदैछ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण बिदा हो, विशेष गरी पश्चिमीहरूका लागि। मेरी क्रिसमस स्लाइड एक पज्जल खेल हो जुन बिदामा सम्बन्धित छ। यदि तपाईंलाई यो खेल मनपर्दछ, आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्न नबिर्सनुहोस्! क्रिसमसको बारेमा यो स्लाइड पहेली खेल खेल्नुहोस्। Images छविहरू र game खेल मोडहरू समावेश गर्दछ। यी छविहरू क्रिसमस वा सान्ता क्लजसँग सम्बन्धित छन्। तपाईको कार्य भनेको निर्धारित समय भित्र पजल पूर्ण गर्नु हो र सबै टुक्राहरूलाई तोकिएको स्थानमा तान्नु हो। यो ध्यान दिएर लायक छ कि तपाईले सबै प्याटर्न याद गर्नु पर्दछ, र त्यसपछि ती सँगै राख्नु पर्छ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?
# html5Androidपशुसंयोगकार्टुनहरूबरफLindoमोबाइलक्रिसमसकोहिउँबच्चाबच्चाहरुआरा पजलछुट्टिहरु